HCBS Workforce Development Grants-Somali / Minnesota Department of Human Services
Deeqaha Horumarinta Shaqaalaha HCBS
Sharci-dejinta Minnesota waxay abuurtay barnaamijka deeqda horumarinta shaqaalaha HCBS si ay u hantaan oo ay u nageeyaan shaqaalaha daryeelka tooska ah ee bixiya adeegyada guriga iyo bulshada ee dadka naafada ah iyo dadka waaweyn.
Deeqda, oo dhan $11,176,000, ayaa sugaysa oggolaanshaha dawladda dhexe. Deeqdani waxay bixisaa:
$5,588,000 oo sanad xisaabeedka 2023, Luulyo 1, 2022, ilaa Juun 30, 2023 ah
$5,588,000 oo sanad xisaabeedka 2024, Luulyo 1, 2023, ilaa Juun 30, 2024 ah
Guddoomiyaha DHS waxa uu la tashan doonaa dhinacyada danaynaya si ay u abuuraan qorshaha isticmaalka lacagaha ugu dambayn March 1, 2022.
Shaqaalaha U qalma
Ugu yaraan 90 boqolkiiba maalgelinta waa in lagu jiheeyaa shaqaalaha qaata boqolkiiba 200 ama ka yar heerka saboolnimada federaalka ah.
Deeqdani way baaxad weyntahay. HCBS waxaa kujira kuwa soo socda:
Xarumaha baxnaaninta iyo tababarka maalinta (DT&H)
Kalkaaliyaasha daryeelka guriga (RN iyo LPN)
Wakaaladaha caafimaadka guriga (HHA)
Adeegyada xasilinta guryaha
Taageerada guriyeynta adeegyada dheeriga ah
Adeegyada Guri Raridda Minnesota (MHM)
Kaaliyaha daryeelka shakhsiyeed(PCA)
Adeegyada Ka-dhaafitaanka iyo Daryeelka Kale (AC).
DHS waxay leedahay dhawr arrimood oo ay tahay inay tixgeliso marka ay samaynayso qorshe lagu deeqaha bixinayo shaqaalaha:
Qiyaasta tirada shaqaalaha xaqa u leh way kala duwan tahay. Hal qiyaas waxaa Minnesota ka shaqeeya 400,000 oo ah xirfadlayaal taageero toos ah/kaaliyeyaasha daryeelka gaarka ah. Warbixin kale, ee ay diyaarisay PHI, ayaa lagu qiyaasay ilaa 151,400 oo shaqaale ah. Haddii shaqaale kasta uu helo deeq (iyadoo ku salaysan labada qiyaasood ee sare):
$11,176,000 oo loo qaybiyay 400,000 waa $28 qofkiiba
$11,176,000 oo loo qaybiyay 151,400 waa $74 qofkiiba
Markaa qiyaas ahaan kuma aadayso lacag badan qofkiiba, xitaa haddii aan xaddidno cidda xaqa u leh. Qodobka kale oo in la tixgeliyo ah: Siinta xitaa wax yar shaqaalaha qaarkood waxay gelin kartaa cashuur sare oo waxay keeni kartaa hoos u dhac ku yimaada dakhligooda guriga.
Heerka Saboolnimada Federaalka
Tilmaamaha saboolnimada 2021 waxay ku salaysan yihiin dakhliga qoyska, ee maaha mushaharka qofka Sidaa darteed, way adkaan doontaa in la ururiyo macluumaadkan iyada oo aan la waydiisan macluumaadka cashuuraha codsadaha deeqda. Hadafka deeqda waa 200 boqolkiiba ama ka yar inta ugu badan Heerka saboolnimada federaalka ee ay soo saartay Waaxda Caafimaadka iyo Adeegyada Aadanaha ee Mareykanka waa:
2021, Heerka Saboolnimada Federaalka
Tilmaamaha faqriga (100%)
Tilmaamaha faqriga (200%)
Qofka keliya ee shaqeeya waqti buuxa ee gaaraysa $12.38 saacaddii: $12.38 saacaddii x 40 saacadood oo toddobaad shaqo ah x 52 toddobaad = $25,750
Qofka keliya ee shaqeeya waqti buuxa ee gaaaraysa $21.11 saacaddii: $21.11 saacaddii x 40 saacadood oo toddobaad shaqo ah x 52 toddobaad = $43,909
PHI waxay ku qiyaastay 45% shaqaalaha daryeelka tooska ah inay ku nool yihiin guryo ay soo gasho wax ka hooseeya 200% heerka saboolnimada federaalka (PDF).
HF 33/SF37 nooca 2 aad ee sharciga
(qoraalku wuxuu ka bilaabmayaa sadarka 497.26)
Qayb. 20. DEEGAHA HORUMARINTA SHAQAALAHA HCBS
(a) Xeerkan waxa ku jira $0 sanad xisaabeedka 2022 iyo $5,588,000 sanad xisaabeedka 2023 si wax looga qabto caqabadaha la xidhiidha soo jiidashada iyo ilaalinta shaqaalaha daryeelka tooska ah ee bixiya adeegyada guriga iyo bulshada ku salaysan ee dadka naafada ah iyo dadka waaweyn. Asaaska maaliyadda guud ee ujeedadan lagu soo daray xeerkan waa $5,588,000 sanad xisaabeedka 2024 iyo $0 sanadka xisaabeedka 2025.
(b) Ugu yaraan 90 boqolkiiba maalgelinta bixintan waa in lagu jiheeyaa shaqaalaha qaata 200 boqolkiiba ama ka yar heerka saboolnimada federaalka ee hadda ay bixiso Waaxda Caafimaadka iyo Adeegyada Aadanaha ee Mareykanka.
(c) Guddoomiyuhu waa inuu la tashadaa dadka ay khusayso si uu u dhamaystiro warbixinta caddaynaysa qorshaha ugu dambeeya ee isticmaalka lacagaha. Guddoomiyuhu waa inuu daabacaa warbixinta ugu dambayn March 1, 2022, oo ogaysiiya shirguddoonka iyo mas'uulada xubnaha laga tirada badan yahay ee guddiyada sharci-dejinta ee awoodda u leh siyaasadda caafimaadka iyo adeegyada aadanaha iyo maaliyadda.